Ndigqibile iKhosi yokuFunda ngokuKhangela: Uvandlakanyo kunye neMbono- Ikkaro
yokuqalisa >> U kufunda >> Ikhosi yokuKhubazeka yokufunda
Crash vs Umatshini wokufunda iKhosi
Ikhosi elula kakhulu kunaleyo Ukufunda ngomatshini weCorsera kunye nokusebenza ngakumbi. Masithi ikhosi ye-Coursera igxile ekuqondeni indlela ii-algorithms ezisebenza ngayo ngokwezibalo ngelixa kuGoogle's Crash ezo algorithms ziphantse zafana neebhokisi ezimnyama, bakunika inkcazo encinci kwaye bakufundise ukuba ungayenza njani ngeTensor Flow.
Kwaye lo ngumahluko omkhulu. Ikhosi kaGoogle, ngaphandle kokucacisa kubunzulu obungaphantsi kweekhonsepthi ezahlukeneyo kunye nealgorithms yokufunda komatshini, isifundisa ukuzisebenzisa kwaye siqale ukusebenzisa iTensorFlow kunye neKeras.
Yonke imithambo yenziwe kunye I-Google Colab, apho sele sinendawo yophuhliso elungiselelwe. Ngumahluko omkhulu kunye nekhosi yeCursera esebenza neMatalab okanye i-Octave ukuphumeza i-algorithms. Kodwa awuboni nto ivela kwiTensorflow okanye indlela yokusombulula ingxaki yokwenyani.
Ukucaphula uluvo lwam kuphononongo lwale khosi
-Ukukhetha nini ialgorithm enye okanye enye.
-Ukhetha njani kwaye uchaze iiparameter ezahlukeneyo.
-Zeziphi iingxaki ezinokuvela ngobuchwephesha kwaye ngakumbi manyathelo mani ekufuneka uwathathe.
Inkqubo yoPhuculo lokuFunda oluMatshini oluvela kuGoogle lunokwenziwa nokuba awunawo amanqanaba aphezulu emathematics, i-Coursera evela kuAndrew Ng ayinayo
Ajenda: Yintoni ebonwayo kwikhosi
Okokuqala, uqala ngengcaciso malunga nokuba yintoni na ukuFunda koMatshini, iikhonsepthi eziphambili kunye neentlobo zeengxaki. Kwaye ngoku, lixesha lokuthetha ngezi ngongoma zilandelayo. Xolela ukuba kukho ixesha elininzi esiNgesini, kodwa ikhosi ibhalwe ngesiNgesi (nangona kulula ukuyilandela) kwaye uninzi lwezitshixo azinakho ukuguqulelwa, okanye xa ziguqulelwe ziphulukana nengqondo, kuba kwimeko yoFundo loMatshini wonke umntu nakuzo zonke iziza bathi ngesiNgesi.
Ukuhlengahlengiswa komgca okanye ukuLungiswa komgca
Ukuphulukana ngokulingana: umsebenzi olahlekileyo odumileyo
IGradient Phantsi kunye neGradient Stochastic Phantsi
Inqanaba lokufunda okanye inqanaba lokufunda.
Faka uphawu lokuwela ngokuwela kwelinye iivenkile ezishushu
Ukumiselwa kwakhona (ukulula kunye nokunqaba) (L1 kunye neL2)
Ukuchaneka, ukuchaneka kunye nokukhumbula
Ijika leROC kunye neAUC
Iinethiwekhi zangaphakathi (Uqeqesho, Inye vs Zonke, iSoftmax)
Njengoko benditshilo, isebenza noGoogle Colab.
Ukuba uqala kwaye ufuna ukufunda ukuphumeza imizekelo elula. Yindlela elungileyo yokuqalisa.
Kukho iiyure ezili-15 onokuthi uzenze ngesantya sakho, kwaye nangona kukho imithambo akuyomfuneko ukuba uhambise okanye uphumelele naluphi na uvavanyo.
Njengoko bekhawuleza, ngokuqinisekileyo ndiza kujonga konke abanako kuGoogle.
Uvavanyo kunye nokulungiswa kweempazamo
Ukongeza ekuqhubekeni ukuvavanya ezinye ze izifundo esizishiye kuluhlu ukujonga ukuba banjani kwaye ukuba ndenza into enzulu esele iqhubele phambili.
Ndineprojekthi enzulu eqhubekayo yokwenziwa kwesixhobo emsebenzini kwaye into endiyifunayo ngoku kukuqala ukusebenzisa yonke into endiyifundileyo ngeli xesha kunye nokulwa neengxaki zokwenyani.
Ndiza kuhlala ndixela inkqubela yam kwibhlog.
izigaba U kufunda Ukuhamba kwetikiti
1 Crash vs Umatshini wokufunda iKhosi
2 Ajenda: Yintoni ebonwayo kwikhosi
3 Ngubani lowo
4 Kwaye ngoku?